I-PGA Tour Safeway I-Open Golf Tournament
Iingqinamba kunye neenkcukacha, iinkokeli ezidlulileyo kunye neentlanzi
Isitya sokutya esitolo se-Safeway sithatha isihloko sokuxhaswa kwale ngqungquthela eqala ngo-2016, okwenza i-Safeway Open. Kwaye kwaziwa ngaphambili njengeFrys.com Vula.
Le ngqungquthela yayiyinxalenye ye- PGA Tour 's Fall Series ngo-2012, kodwa ukuqala kwexesha le-2013-14 yaba yinto yeemveko zokuvulwa kwexesha, kunokuba kuvaliwe kwexesha.
I-Safeway Open yi-tournament yokuvula ixesha-konyaka kwinqanaba le-2017-18 kwinqanaba lokutyelela, u-Oktobha.
Ingqungquthela ye-72-hole, umdlalo we-stroke-play, kunye neengongoma ezipheleleyo ze- FedEx Cup .
2017 Safeway evuliwe
UBrendan Steele wabuyela njengomdlali kwaye wenza njalo lo mqhubi wokuqala wexesha eli-2. USteele wagqiba nge-69 ukugqiba ngo-15-ngaphantsi kwe-273. Leyo yayiyimibini phambi komqhubi uTony Finau. UPhil Mickelson uboshwe kwindawo yesithathu.
2016 Safeway evuliwe
UBrendan Steele uvaliwe ngama-65 ukuphumelela ngesifo esisodwa. USteele wadutyulela kuma-67-65 ngeveki, kwaye ekugqibeleni ukugqibela yajikeleza izibonda ze-16, 17 neye-18 ukugqiba nge-18-phantsi kwe-270. Le nto yayilungele umgca we-1 ophazamisayo u-Patton Kizzire. Kwakuyi-Steele yokuqala yokunqoba kwe-PGA Tour ukususela ngo-2011 kunye neyesibini yomsebenzi wakhe.
2015 Frys.com Vula
U-Emiliano Grillo unqobe uKevin Na ngokukhawuleza ukuphumelela uhambo luka-2015-16 lwangonyaka. UGrillo noNa bagqiba izimbobo ezingama-72 eziboshwe kwi-15-phantsi kwe-273, kwaye zidibanisa ama-5 kwisiqalo sokuqala esongezelelweyo. Kodwa uGrillo wayinqoba kunye ne-birdie kwisango lesibini.
Kwakuyi-PGA yokutyelela kokuqala kweGrillo, ekuqaleni kokuqala kwexesha lakhe lohambo.
Iirekhodi eziValiweyo eziValiweyo
Iimpawu ezingama-72 - i-262: iTroy Matteson (2009), uRickie Fowler (2009), uJamie Lovemark (2009), uCameron Beckman (2008), uKevin Sutherland (2008)
Izimbobo ezili-18 - 61: UMike Weir (2009), uTroy Matteson (2009), uKevin Stadler (2008), uMark Hensby (2007)
I-Safeway Open Open Course
I-Safeway Open okwamanje idlala kwi-Silverado Resort kunye ne-Spa eNapa, eCalifornia. Kwakudala idlala kwiCordeValle Golf Club eSan Martin, Calif., NaseGreyhawk Golf Club eS Scottsdale, eAriz.
Ngo-2006 no-2007, umdlalo wePGA Tour yaseLas Vegas wabizwa ngokuthi yiFrys.com Vula. Ngoko ngo-2007, lo nyaka wokuvulwa komcimbi, uhambo lwaye lwaba nguFrys.com Open (e Las Vegas) kunye nalo mqhudelwano, ngoko kuthiwa yi-Fry's Open Open. Ngo-2008, umdlalo weLas Vegas wabizwa kwakhona, waba yiShriners Izibhedlele ze-Children Open , kwaye esi siganeko satshintshela kwi-Frys.com Igama elivulekileyo.
Yaqhubeka phantsi kwe-Frys.com Igama elivulekileyo kude kube ngowama-2016, xa umxhasi omtsha weteksi, i-Safeway yokutya ivenkile yokutya, ithatha.
Inkotyelelo yadlala eArizona kwiminyaka yokuqala yokuqala emithathu yobukho, kodwa yafudukela eKalifornia ukuqala ngo-2010.
Nge-2009 Frys.com Evulekileyo, uTroy Matteson usethe irekhodi le-PGA Tour ngeenxa yokubuya emva kokubuya kwee-61. Ingxelo yayiyimigubho embalwa elandelelanayo.
Nangona kunjalo, uMatteson wayedinga ukuba aphumelele. Amanye amalungu e-playoff kwakunguJamie Lovemark kunye noRickie Fowler. I-Fowler yayingekho ilungu lePGA Tour, kodwa imali ayifumene apha yamnceda ukuba afumane isimo sePGA Tour.
Ngo-2010, uRocco Mediate wabhalwa i-ace kwinqanaba lokuqala, waqhubeka ephumelele. Enyanisweni, i-Mediate ikhutshwe ngekontsi kuzo zonke izijikelezo ezine. I-ace round yokuqala yayikwakho ukhozi; kwinqanaba lesibini, waxhuma kwiiyure ezili-160 nge-3; kumjikelezo wesithathu, wakhwela kwiiyure ezili-111 nge-5; kwaye kumgca wokugqibela Umdibaniso ophuma kwiiydi ezili-116 nge-4.
UBrendan Steele waba ngulo mdlali wokuqala wecandelo lomdlali xa ephindaphinda njengengqobhoko ngo-2016 no-2017.
Iimidlalo ezidlulileyo kwiPGA Tour Safeway Open
2017 - UBrendan Steele, 273
2016 - UBrendan Steele, 270
2013 - uJimmy Walker, 267
2012 - uJonas Blixt, 268
2011 - UBryce Molder-p, 267
2009 - iTroy Matteson-p, 262
2008 - uCameron Beckman-p, 262
I-Fry Electronics Evulekile
I-KPMG ye-PGA Championship Tournament yabasetyhini
Ngo-1999 i-US Open: Payne Stewart's Last Win
US Open Open Winners: Bonke abaGoli abaye baphakamisa iTrophy
Abancinci beGolfers ukuba banqobe amaqhawe amaninzi (amadoda)
I-Phosphate Buffer Recipe
Imozulu kunye neNkcubeko yee-Altocumulus Clouds
I-5 ye-Broadway Shows yabantwana
Iindawo ezigqibeleleyo zokuthengisa ii-Antiques kunye ne-Collectibles Online
Mudras: IiHands zeBuddha
I-Battle of Harpers Ferry ngexesha leMfazwe yaseMelika
I-10 yeTGIF ephezulu